राजदूत लक्की शेर्पाबारे निर्णय नहुदा के हुदैछ अष्ट्रेलियामा ? LUCKY SHERPA « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Video » राजदूत लक्की शेर्पाबारे निर्णय नहुदा के हुदैछ अष्ट्रेलियामा ? LUCKY SHERPA
राजदूत लक्की शेर्पाबारे निर्णय नहुदा के हुदैछ अष्ट्रेलियामा ? LUCKY SHERPA
अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथी लागेको आरोपका बारेमा पराराष्ट्र मन्त्रालयले छानविन गरिसकेको छ । प्रतिवेदन तयार भएको दुइ साता भन्दा बढी बतिसकेपनि सरकारले अझैसम्म केही निर्णय लिन सकेको छैन ।
समयमा निर्णय नहुदा अष्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा अन्यौलता थपिएको छ । नेपाली समाजमा काम गर्ने तथा राम्रो राजदूतको छवी बनाएकी लक्की शेर्पामाथीको छानविन समयमै नटुगिंदा यहाको समुदायमा वितृष्णा समेत बढेको छ ।
यहि पृष्ठभूमिमा हामीले अष्ट्रेलियाका नेपाली समुदायका व्यक्तिहरुलाई दुइ वटा प्रश्न राखेका छौ । राजदूत छानविन बारे सरकारलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? र अर्को राजदूत शेर्पाको डेढ वर्षे कार्यकाललाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
उनीहरुले दिएको प्रश्नको उत्तर जस्ताको तस्तै भिडियो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्
सरकारले छानविन गरिरहेको छ । बारे निर्णय नहुदा के हुदैछ अष्ट्रेलियामा ?
नेपाली समाजको नजरमा लक्की